Shir balaaran oo ay isugu yimaadeen Jaaliyada Gobolka Hiiraan ee dalka UK |
Gudoomiyaha Golaha Badbaadada iyo Samatabixinta Gobolka Hiiraan oo talo aad u wanaagsan Bixiyay.
warxumo-tashiilka iyo wariyayaal ka soomaliya maxaa kala haaysta?
Xaflad soo dhaweyn london: Gudoomiye ku xigeenka gudiga arrimaha gudaha iyo amniga Baarlamaanka Dowlada federalka Soomaliya Mudane Daahir Amiin
abuukar ibraahim on Howlaha Gudiga fulinta
Golaha guurtada wuxuu ka kooban yahay wakiilada beelaha Gobolka Hiiraan. Golaha guurtada wuxuu ...
Guddiga fulintu wuxuu ka kooban yahay xubnaha hoos ku xusan: Guddomiye Guddoomiye ku xigeenka ...
Ujeedada Golahan waxaa loo dhisay inuu samatabixiyo shacabka reer Hiiraan, isla mar ahaantaana ...
Hadafyada In laga abuuro jawi nabadeed iyo xasilooni buuxda dhamaad degaanada gobolka Hiiraan ...
Golaha guurtada wuxuu ka kooban yahay wakiilada beelaha Gobolka Hiiraan. Golaha ...
Guddiga fulintu wuxuu ka kooban yahay xubnaha hoos ku xusan: Guddomiye Guddoomiye ku ...
Ujeedada Golahan waxaa loo dhisay inuu samatabixiyo shacabka reer Hiiraan, isla mar ...
Hadafyada In laga abuuro jawi nabadeed iyo xasilooni buuxda dhamaad degaanada gobolka ...
Shir balaaran oo ay isugu yimaadeen Jaaliyada Gobolka Hiiraan ee dalka UK
Wax garad, siyaasiyiin, aqoonyahano, culuma udiin, iyo ganacsato ka soo jeedo gobolka Hiiraan ayaa shir jaraa’id waxa ay ku qabteen magaalada London, waxaana ay ka soo horjeesteen shirkii wada tashiga ahaa ee dhowaan magaalada baladweyne xarunta gobolka Hiiraan, shirka jaraa’id ayaa wuxuu u dhacay sidatan:
Shirkan oo dhacay maalinimadii axada, 03.maajo.2015, ayaa waxaa isugu yimid dhamaan beelaha soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Hiiraan, marka laga reebo beesha Bariga Baladweyne oo iyaga gooni iska dhigay ka dib markii ay shir iyaga ku koobaan uu in muda ahba uga socday Bariga Baladweyne.
Beelaha soomaaliyeed ee isugu yimid shirkan ayaa ah 13 beelood oo dhamaan ka soo jeeda Gobolka Hiiraan, waxayna halkaa ka sheegeen inuu kulankan yahay mid wadatashi. Waxaa kaloo ay shirkan ku falanqeeyeen waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin xaga siyaasada, nabadgelyada, iyo midnimada dhamaan beelaha dega gobolka Hiiraan.
Shirkan oo ay ka soo baxeen dhowr qodob oo ay ka mid yihiin;
1. In la sameeyo maamul ka kooban 13 xubnood, halkaas oo ay iyaga dhexdooda iska soo doortaan 3 xubnood oo kala aha
a. Gudoomiyaha maamulka jaaliyada Gobolka Hiiraan oo loo doortay Mohamuud Adan Bedi
b. Afhayeenka maamulka jaaliyada Gobolka Hiiraan oo loo doortay Abdirashid Mohamed Hashi
c. Xoghayaha maamulka jaaliyada Gobolka Hiiraan oo loo doortay Mohamuud Abdirahmaan Guure
2. Waxay jaaliyada halkaan ka cadeynayaan shirka ka socda Bariga Baladweyne inuu yahay shir hal beel ay isugu tagtay, oo ay ku xalineyso qilaafkeeda dhexdooda ah, shirka halkaa ka socdana aysan ku jirin beelaha kale ee reer Hiiraan.
3. Waxay jaaliyadu halkaan ku taageereysaa shirka ka socda magaalada Deefoow, oo ay joogaan dhamaan odayaashii, ugaasyadii, wabaradii, siyaasiyiintii, waxgaradkii ka soo jeeda 13’ka beelood ee dega gobolka Hiiraan.
Beelaha Deefoow isugu yimid oo ay ka mid yihiin:
1. Beesha Ceyr ee Habargidir
2. Beesha Ujeejeen
3. Beesha reer aw-hassan
4. Beesha reer aw faqi-cumar
5. Beesha reer aw faqi-muxumed
6. Beesha Gaaljecel
7. Beesha jidle
8. Beesha Baadicade
9. Beesha Jajeele
10. Beesha Qubeys
11. Beesha Sheeqaal
12. Beesha Eyle
13. iyo Beesha Makane
Dhamaan xubnihii matalayey beelaha uu fadhiyey shirka London ayaa halkaa ku cadeeyey qodobadii halkaa lagu soo gudbiyey.
Waxaa kaloo ay halkaa ka sheegeen inaysan qeyb ka aheyn shirka ka socda Bariga Baladweyne, maadaama shirkaas uu yahay shir beel gaar ah ay isugu timid, danahooda gaarka ahna ay halkaa u fadhiyaan, danta guud ee bulshada Hiiraan’a uusan waxba ka quseyn shirka Bariga Baladweyne.
Masuuliyiinta halkaa isugu yimid ayaa waxay taageereen shirka ka socda Deefoow, shirkaas oo ah mid ay ku dhan yihiin dhamaan 13’ka beelood ee dega gobolka Hiiraan, beesha ka maqan ee ku mashquulsan nidaam keli talis, kana dhaqa adeegay wadatashiga, ayaa waxaa ay sheegeen beelaha halkaa isugu yimid inaysan marnaba ka ogolaaneyn inay u taliso beel wadatashiga diidan, balse iyaga dhankooda ay soo dhaweynayaan haddii beesha Bariga Baladweyne ay u hogaansanto nabada iyo wadatashiga danta u ah horumarka iyo mustaqbalka gobolka.
Halkan ka daawo shirka:
Shirka dib uheshiisiinta iyo aayo katalinta g.hiiraan wajigiisi sadaxaad oo kafurmay galbeedka magaalada b/weyn hoteel daaru salaam →
Golaha samatabixinta iyo aayo ka talinta gobolka Hiiraan
+252 1 6 ..........